ExeCoin စျေး - အွန်လိုင်း EXE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ExeCoin (EXE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ExeCoin (EXE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ExeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ExeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ExeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ExeCoinEXE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.176ExeCoinEXE သို့ ယူရိုEUR€0.15ExeCoinEXE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.135ExeCoinEXE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.162ExeCoinEXE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.59ExeCoinEXE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.12ExeCoinEXE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.93ExeCoinEXE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.663ExeCoinEXE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.235ExeCoinEXE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.247ExeCoinEXE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.96ExeCoinEXE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.37ExeCoinEXE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.948ExeCoinEXE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹13.18ExeCoinEXE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.29.84ExeCoinEXE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.242ExeCoinEXE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.269ExeCoinEXE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.48ExeCoinEXE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.22ExeCoinEXE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.8ExeCoinEXE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩209.02ExeCoinEXE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦68.4ExeCoinEXE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.93ExeCoinEXE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.88
ExeCoinEXE သို့ BitcoinBTC0.00002 ExeCoinEXE သို့ EthereumETH0.000473 ExeCoinEXE သို့ LitecoinLTC0.00331 ExeCoinEXE သို့ DigitalCashDASH0.00205 ExeCoinEXE သို့ MoneroXMR0.00206 ExeCoinEXE သို့ NxtNXT14.55 ExeCoinEXE သို့ Ethereum ClassicETC0.0265 ExeCoinEXE သို့ DogecoinDOGE52.45 ExeCoinEXE သို့ ZCashZEC0.00221 ExeCoinEXE သို့ BitsharesBTS6.95 ExeCoinEXE သို့ DigiByteDGB6.03 ExeCoinEXE သို့ RippleXRP0.636 ExeCoinEXE သို့ BitcoinDarkBTCD0.0062 ExeCoinEXE သို့ PeerCoinPPC0.594 ExeCoinEXE သို့ CraigsCoinCRAIG81.95 ExeCoinEXE သို့ BitstakeXBS7.67 ExeCoinEXE သို့ PayCoinXPY3.14 ExeCoinEXE သို့ ProsperCoinPRC22.57 ExeCoinEXE သို့ YbCoinYBC0.0001 ExeCoinEXE သို့ DarkKushDANK57.67 ExeCoinEXE သို့ GiveCoinGIVE389.24 ExeCoinEXE သို့ KoboCoinKOBO40.98 ExeCoinEXE သို့ DarkTokenDT0.162 ExeCoinEXE သို့ CETUS CoinCETI518.99
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 06:35:02 +0000.